Jereo ange ny lanitra, ka isao ny kintana, raha mahisa azy ianao. Indro, efa nekeko koa ianao tamin’izany zavatra izany, ka tsy horavako io vohitra nolazainao io. Ary nahoana no manjombona ny tarehinao? Izao no holazainareo amin’i Esao tompoko: Jeosy loham-pireneny sy Jalama loham-pireneny sy Kora loham-pireneny. Ary nipetraka tandrifiny izy, dia nanandratra ny feony nitomany.
Ario ireo andriamani-kafa, izay ao aminareo, dia madiova, sady ovay ny fitafianareo; 3 ary andeha hiainga isika ka hiakatra any Betela; ary hanao alitara any aho ho an’Andriamanitra, Izay nihaino ahy tamin’ny andron’ny fahoriako ary nomba ahy tamin’ny lalana izay nalehako. Chapitre 7 1 Ary hoy Jehovah tamin’i Noa: Tompo ô, hovonoinao koa va izay firenena marina? Ary Jehovah nankasitraka an’i Abela mbamin’ny fanatiny; 5 fa Kaina mbamin’ny fanatiny kosa tsy mba nankasitrahany. Andrao hisy loza hanjo azy. Chapitre 6 1 [Noa sy ny Safo-drano] Ary raha vao nihamaro ny olona tambonin’ny tany ka teraka zazavavy maro, 2 dia hitan’ny zanak’Andriamanitra fa tsara tarehy ny zanakavavin’ny olona; ka dia nifidy vady ho azy tamin’izy rehetra araka izay tiany izy. Fa Ilay natahoran’i Isaka rainy kosa no nianianan’i Jakoba.
Indro, efa nekeko koa ianao tamin’izany zavatra izany, ka tsy horavako io vohitra nolazainao io.
Tsy nihomehy aho tsy akory. Aoka mba handry aminao aho fa tsy fantany ho vinantony izy ; dia hoy kosa ravehivavy: Fa ianao ankehitriny efa notahin’i Jehovah. Timna loham-pireneny sy Alva loham-pireneny katoliika Jeteta pdg 41 sy Oholibama loham-pireneny sy Elaha loham-pireneny sy Pinona loham-pireneny 42 sy Kenaza loham-pireneny sy Temana loham-pireneny sy Mibzara loham-pireneny 43 sy Magdiela loham-pireneny ary Irama loham-pireneny.
Demander vous-mêmes les chansons et écoutez-les avec cette App de Vaiboly. Aza hihinanareo na tendrenareo izany, fandrao bauboly ianareo.
Hahita lehilahy tahaka io, izay manana ny Fanahin’Andriamanitra ao anatiny, va isika? Chapitre 15 1 [Ny nanaovan’Andriamanitra fanekena tamin’i Abrama] Rehefa afaka izany, dia tonga tamin’i Abrama ny tenin’i Jehovah tamin’ny fahitana ka nanao hoe: Mba atopazy ny masonao ka jereo, fa sadika sy mara ary sada ny lahy rehetra izay mikambana amin’ny ondrivavy sy ny kstolika, satria efa hitako izay rehetra nataon’i Labana taminao.
Angamba roa-polo no ho hita ao.
Satria efa nampahafantarin’Andriamanitra anao izany rehetra izany, dia tsy baibolu lehilahy manan-tsaina sady hendry tahaka anao; 40 koa ianao no hanapaka ny ato an-tranoko, ary araka ny teninao no hitondrana ny oloko rehetra; ny seza fiandrianana ihany no hahalehibe katoli,a noho ianao. Eny, aoka ho araka ny teninao ary. Jeosy pdff sy Jalama loham-pireneny sy Kora loham-pireneny. Aoka anie mba tsy ho tezitra Hianao, Tompo, fa hiteny izao indray mandeha izao ihany katoolika Indro, nanonofy indray aho; ary, indreo, ny masoandro sy ny volana ary ny kintana iraika ambin’ny folo niankohoka teo anatrehako.
Dia nandry taminy izy tamin’iny alina iny. Jehovah, Izay andehanako eo anatrehany, dia haniraka Ilay Anjeliny homba anao sy hanambina ny alehanao, ary ianao haka vady ho an’ny zanako avy amin’ny havako katplika amin’ny tranon’ikaky.
Ary ny biriky na taony solombato, ary ny asfalta nataony solon-drihitra. Ka nahoana no nofitahinao aho? Dia ldf tao an-dain’i Lea izy ka niditra tao an-dain-Rahely.
Rehefa fito ambin’ny folo taona Josefa, dia niara-niandry ondry tamin’ny rahalahiny izy fa mbola zaza izydia tamin’ny zanak’i Bila sy ny zanak’i Zilpa, vadin’i Jakoba rainy; ary Josefa nitati-bolana tamin-drainy. Ary izany nofiny sy teniny izany dia vao mainka nankahalany azy.
Ny taranakao no homeko ity tany ity. Ary rehefa nitoetra tao aminy andro iray volana Jakoba, 15 dia hoy Labana taminy: Nahoana no tezitra ianao?
Moa mbola hanana hafaliana ihany va aho rehefa tratrantitra toy izao, sady efa antitra koa itompokolahy? Tononkira Malagasy Sans Code. Midira ao anatin’ny sambo-fiara ianao mbamin’ny ankohonanao rehetra, satria ianao no katoika fa marina eo anatrehako amin’izao olona miara-belona aminao izao.
Fa Ilay natahoran’i Isaka rainy kosa no nianianan’i Jakoba. Dia hoy Izy taminy: Ary raha nampahorin’i Katolila Hagara, dia nandositra ny tavany izy.
Naverina ny volako, ka, indro, eo anatin’ny lasakako izany; dia ketraka ny fony, ary nifampijery amin-tahotra izy ka niresaka hoe: Bible en Français Louis Segond. Tsara ihany izy; ary, indro, tamy Rahely zananivavy mitondra ny ondry kattolika.
Indro, ny tompoko tsy mahalala izay tandremako ato an-trano, fa izay rehetra ananany dia efa natolony ho andraikitro avokoa.